प्रत्येक नेपालीको काँधमा ३१ हजार ऋणको भारी - नेपाल समय
प्रत्येक नेपालीको काँधमा ३१ हजार ऋणको भारी
काठमाडौं - प्रत्येक नेपालीको काँधमा ३१ हजार सात सय ५० रुपैयाँ सरकारी ऋण दायित्व देखिएको छ। महालेखा परिक्षकको कार्यालयलले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७४ र ७५ को वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो आंकलन प्रस्तुत गरेको छ।
कार्यालयले शुक्रवार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७४ र ७५ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ। वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको ऋण दायित्व गत वर्षको तुलनामा एक तिहाइले बढेको हो।
महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कूल सरकारी ऋण दायित्व नौ खर्ब १५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ९१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण पाँच खर्ब २४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ। उक्त ऋण दायित्वलाई दुई करोड ८८ लाख २९ हजार नेपालीलाई भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ३१ हजार सात सय ५० रुपैयाँ हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३ र ७४ को तुलनामा प्रतिव्यक्ति ऋण सात हजार ४३ रुपैयाँले बढेको हो।
बेरूजु तीन खर्ब ७७ अर्ब
पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु तीन खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। २०७३/७४ मा बाँकी रहेको बेरुजु दुई खर्ब ९० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमा समायोजन र फछ्र्योट गरिएको रकम घटाउदा पनि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा थप एक खर्ब ४१ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।
हुण्डी कारोबारमा संलग्न ८ जना पक्राउ
२५ हजार घुससहित शिक्षा इकाइ प्रमुख पक्राउ
ललितपुर महानगरको बजेट ५ अर्ब १७ करोड
विस्फोट गराउने विप्लवका पाँच सय 'टाइमर पिन'...
मेरो नाक, मेयरको आँट र बजार हल्ला (ब्लग)
बैंककबाट क्यानडा हिडेका तीन सय युवा जब काठमाडौंमा ओर्लिए...
दरबार हत्याकाण्डको अर्को खुलासा : श्रुति जीवितै थिइन् !
सीसी क्यामरा बन्द गरेर मेयरले कर्मचारी कुटे
'टेक्सासमा पढ्ने विद्यार्थी बेरोजगार हुँदैनन्'
प्रचण्डजीले मान्‍नु भएन, मैले 'एक्सन' लिएँ
‘बलात्कारी बाबा’लाई जेलबाट निकाल्ने तयारी
विस्फोट गराउने विप्लवका पाँच सय 'टाइमर पिन' कहाँ छन्?
महिलाभन्दा पुरुष बढी यौन हिंसाको शिकार
'जबज' को लाइनमा फेरि लफडा